Puntland: Baarlaman ay dhalinyaradu qoondo fiican ka heshay, haweenkuse madi ku noqday – Kalfadhi
Guddiga Ansixinta iyo Xallinta Khilaafaadka ee Baarlamanka Puntland, oo uu Madaxweyne Cabdiweli Gaas magcaabay 3-dii Diseembar, ayaa xalay sheegay in ay ansixiyeen 66-da Xildhibaan ee ka mid noqonaya Baarlamanka Puntland shanta sano ee soo socda (2019 – 2023).
Qabashada arjiyada mudanayaasha ayaa bilaabatay 10-kii Diseembar. Guddoomiyaha Guddiga, Caaqil Cismaan Ismaaciil Bare, ayaa suxufiyiinta u sheegay in ay qabteen 144 codsi mudadaas. Lix ka mid ah kuraasta waxaa soo codsaday 48 qof, taas oo muujinaysa in beelaha qaarkood uu ka jiray khilaaf aad u sareeya, sida uu Guddigu sheegay.
Guddigu wuxuu tilmaamay in, si ay uga fogaadaan carqalad, ay mareen habraacii ay ku shaqeeyeen Guddiyadii soo xulista ee Baarlamanadii 2005, 2009, 2014. Taas waxay la micno ah in Isimada Dhaqanka iyo Nabaddoonnada Beelaha ay wali leeyihiin awoodda Soo Xulidda Wakiilada, iyagoo raacaya nidaamka awood qaybsiga ku aadan Golahan ee la isla qaatay sanadkii 1998-kii. Saxiixa kama dambaysta ah ee Isimada soo jireenka ah ayeyna gudigu meelmariyaan.
Gudoomiyaha Guddigu wuxuu sheegay in 49 ka mid ah Wakiiladani ay cusub yihiin, markaas waxaa muuqata in 17 Wakiil ay ka soo noqdeen Golihii hore. Dhalinyarada ayaa la sheegayaa in ay ka badan yihiin 50%. Laakiin, haweenka oo dhawrkii bilood ee u dambeeyay waday dadaalo xoog leh, si ay ku xaqiijiyaan koontada 30%, ayaa hal xubin ka helay Golaha cusub, taas oo niyad jab weyn ku ah dadaaladii haweenka.
Baarlamankii hore waxay haweenku ku lahaayeen laba xubnood oo keliya, waxaase xusid mudan in markii ay la qaybsanayay Golahan 1998-kii ay ergadii shirkaas fadhisay qoondada haweenka ku saleeyeen gobolo, si loo sugo, taas oo la micno ahayd in gobolada Nugaal, Mudug, Bari, Sool iyo Sanaag ay khasab ku ahayd in mid waliba uu xubnihiisa ku soo daro gabar; mase jirin habraac rasmi ah oo faahfaahinaya sida ay beelaha goboladaas u kala yeelanayaan xubnaha haweenka. Baarlamankii berigaas la soo xulay waxaa ku jiray shan gabdhood.
Baarlamankan ayaa Kalfadhigiisii ugu horeeyey, kulankiisa 1-aad waxay maanta oo ah 1-da Janaayo, 2019, ku yeeshay Garoowe, waxayna ku doorteen Guddoomiye ku-meel-gaar ah, kaas oo ay ka dhigeen Xuseen Xaaji Yaasiin oo ah Xildhibaanka ugu da’da weyn Golahan cusub. Waxay isla maantaba bilabeen qaban-qaabada doorashada Guddoonka Golaha, oo dhacaysa 4-ta bishan, kadibna waxay 8-da bishan dooran doonaan Madaxweynaha 5-ta sano ee soo socotota.
Waxaa jagada Madaxweynaha u sharaxan 32 musharax, oo uu ku jiro Madaxweynaha hada xafiiska jooga Cabdiwali Maxamed Cali Gaas. Dowladda Puntland waxay ku guuldaraystay 2013 in ay dadweynuhu Wakiilada iyo Madaxweynahoodaba ku soo doortaan qof kiyo cod. Sidaas oo kale, muddo xiliyeedkii Xukuumaddda hada jirta (2014 -2019) ayaa iyaduna aan guul laga gaaarin ay dadku doorasha galaan.